Bezikuphi izinhloli nenxusa e-India? - Bayede News
Bezikuphi izinhloli nenxusa e-India?
Ukhuvethe luyishaye phansi iComrades Marathon
Kunezinto okuthi nxa zenzeka uzibuze ukuthi zenzeke kanjani. Ukuthi babekuphi abantu zize zenzeke nje? Kuleli sonto kwenzeke into evuse leyo mibuzo. Ukuvela kwezindaba ezithi imigomo yokuphunga ukhuvethe neyabe ivela e-India izophelelwa yisikhathi ezinyangeni nje ezimbili kushiye imibuzo. Okokuqala asiqale sincome uHulumeni wakuleli ngokushabasheka ekutholeni lokho okungaba yisixazululo ngalezi zikhathi zembubhiso. Njengephephandaba siyakutusa ukuzikhandla kukaNgqongqoshe uMkhize nethimba lakhe kanjalo noMengameli wezwe ngokuphokophela. Nawo amaNdiya lawo okuthi asambulele siyathokoza kuwo ngoba phela manxa kufiwa usizo lwamukelwa noma ngabe luvela kuphi. AmaNdiya kube ngelinye lamazwe asabele nxa elakulei limemeza futhi singabalingani nawo ezinhlakeni zepolitiki yamazwe ngamazwe. Sesikusho konke lokho ngeke singavezi ukudumala kwethu ‘ngephutha’ lokungaqapheli into noma yimuphi umthengi ayiqaphelayo ukuthi impahla ayithengayo inesikhathi esingakanani.
Kulokhu siyamthethelela uRamaphosa noMkhize kepha umunwe siwukhomba kulowo olinxusa lakuleli e-India kanye nezobunhloli. Okokuqala nje, le migomo okuthiwa ifika esigidini ibisondezelwe labo abasekhaleli lempi kwezempilo okungathi uma kwenzeka okuthile kubo izwe libe senkingeni. Lokhu nje kukodwa kuyakutshela ukuthi ukucophelela okudingekayo lapha ngokwezinga eliphezulu ngoba ukuphepha kwezwe kulele lapho. Yize lokhu kusabisa, kepha cabanga nje uma singalinyalelwa yisibalo esingako sabasekhaleni lempi. Lobu budedengu busitshela ukuthi ikhona inkinga kwezobunhloli kuleli kanjalo nobudedengu kumanxusa ethu ase-India. Akudingi sikhumbuze uHulumeni wakuleli ukuthi ukudayiswa kwemigomo sekuphenduke into yezepolitiki yezomnotho. Izwe elithole isixazululo liyoceba kanjalo uma ufuna ukuthena izwe eliyisitha sakho ungagadla ohlelweni lalelo zwe lwezempilo.
Ukuthi ixoxo nexoxo liyazigxemela sikubone ngesikhathi izichwensi zamaNgisi zisabalalisa ukuthi kunesifo “saseNingizimu” okungamalumbo nje. AmaNgisi ayenengcindezi yawo achithela kithi ngakho belu ngoba lena sekuyipolitiki. Elakuleli alingathathi izinto kalula ngoba ngephutha nje elincane kungaba nenhlekelele manje nasezizukulwaneni ezizayo.
Bayede News Feb 12, 2021